မိန်းမတို့ ချစ်လိုသော `ချစ်သူကောင်း၊ ခင်ပွန်းကောင်း` | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » မိန်းမတို့ ချစ်လိုသော `ချစ်သူကောင်း၊ ခင်ပွန်းကောင်း`
Posted by manawphyulay on Jan 9, 2011 in Community & Society, Creative Writing, Poetry, Relationships & Family, Society & Lifestyle | 15 comments
၇။ ဥစ္စာချို့တဲ့ ကုန်ခန်းသဖြင့် လည်းကောင်း၊ အရွယ်လွန်သဖြင့် လည်းကောင်း မငြိုငြင်၊ မထီမဲ့မြင် မပြုသော ခင်ပွန်းကောင်းချစ်သူ…..
နံ ပါတ် ၇ ကို လက် မ ခံ ချင် ၀ူး ဗျာ … အ ခု ဟာ က ခင် ပွန်း သည် တွေ ဥစ္စာ ကုန် ခမ်း ရင် မိန်း မ တွေ က စွန်. တာ ပို များ နေ လို. ။
ခုခေတ်ကလည်း ကိုယ်တိုင်မရှာကျွေးချင်ပဲ မိန်းမနားခိုစားချင်တဲ့သူတွေက များလာနေသလို မြင်နေမိလို့ မထည့်လို့မဖြစ်လို့ပါနော်…………..
ပြုနိုင်ခဲတဲ့ အမှု ဆိုတာ.. ကိုရီးယား ကားထဲမှာလို လမ်းမလယ်ခေါင် ဒူးထောက်ပြီး ချစ်ခွင့်ပန်တာလား
အခုခေတ်မှာ တော်တော်များများကတော့ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ပဲ တွေ့နေသလိုပဲ…
ဒေါ်မွန်က ဈေးထဲမှာ အနေများလို့လား ( တော်တော်များများကတော့ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ပဲ တွေ့နေသလိုပဲ…) ဆိုတော့
မနောတောင်းတသောဆုနှင့် အမြန်ဆုံးပြည့်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
မနောရဲ့ စာတွေ အရမ်းကောင်းနေတယ် မဖတ်တာကြာသွားခဲ့လို့လားမသိဘူး
ပေးနိုင်ခဲသော ပစ္စည်းဆိုတာဘာလဲဟင် ……
လူတွေက ပိုက်ဆံနဲ့ ပတ်သတ်လျှင် တွန့်တိုတယ်လေ … တစ်ချို့ယောကျာ်းတွေက တစ်စေ့ကို နှစ်စေ့ခွာပြီး ကပ်စေးနည်းတာ … ။ လက်ဖွာလွန်းတဲ့လူကျတော့လည်း ယူပြီးမှ လက်ဖွာနေတုန်းဆိုရင် ကိုယ်ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူး ။ … စံနှုန်းတွေနဲ့တော့ အိမ်ထောင်ဘက်ကို ရွှေးမယ်လို့ စဉ်းစားထားကြပေမဲ့ … တစ်ကယ်တမ်း ယူဖို့စဉ်းစားရင် အဲ့ဒီအချက်တွေထဲက တစ်ခုလောက်ပဲ စံမီတာတောင် နောက်ဆုတ်မဲ့လူ ရှားပါတယ်။ အကောင်းဆုံးက ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ လူမျိုးဖြစ်ဖို့ပါ ။
ဆရာမိုးမြင့်မောင်ရဲ့ စာထဲမှာ ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ် ။ အတော်ဆုံး ယောကျာ်းဆိုသည်မှာ မိမိဧ။် ဇနီးလိုအပ်သည်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်တဲ့… ။ အတော်ဆုံး မိန်းမဆိုသည်မှာ ထိုကဲ့သို ယောကျာ်းမျိုးကို ရအောင် ယူနိုင်သောမိန်းမဖြစ်သည်တဲ့ … မှတ်သားစရာလေးပဲ
အထက်ပါအရာအားလုံးအတွက် အချစ် တစ်ခုသာလို၏။
etone ပြောသလို ဇနီးလိုအပ်သည်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ခင်ပွန်းမျိုးဆိုတာရှားလိမ့်မယ်ထင်တယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူ့အလိုတောင်နတ်မလိုက်နိုင်တာ အကျွန်ုပ်မိန်းမတို့၏အလိုကို အသင်ယောကျာ်းများ မည်မျှမည်သည့်အတိုင်းအတာထိလိုက်နိုင်မည်တုန်း
This Right Yu Yu!
ယုယုနဲ့ မနောရေ … ဇနီးသည်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ ယောကျာ်းမျိုးရှားတယ်ဆိုပေမဲ့ လိုအပ်ချက်ဆိုတာကလည်း တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးမတူညီကြပါဘူး ။ ဆိုကြပါစို့ လောဘကြီးတဲ့ မိန်းမက ပိုက်ဆံများများလိုမယ် …။ ရောင့်ရဲတင်းတိမ်တတ်တဲ့ မိန်းမက လူတန်းစေ့နေရယုံလေး တောင့်တမယ် …အဲ့ဒီအပေါ်မှာ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင် ၊ မပေးနိုင်ဆိုတာက သူနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ယောကျာ်းပေါ်မှာချည်းပဲ မူတည်မနေပဲ တောင်းဆိုတဲ့၊ လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်ပေါ်တဲ့ မိန်းမပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါတယ်… ။
ကြုံတုန်းဝင်ကြွားလိုက်ဦးမယ် …. အခုလက်ရှိကိုယ့်မှာ အဲ့ဒီလို ရှားပါးတဲ့ လိုအပ်ချက်မှန်သမျှ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ ချစ်သူမျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားတယ် …။ မကြာခင်ပဲ ဘ၀သစ်တစ်ခုကို နှစ်ယောက်အတူသွားတော့မယ်လို့လည်း ရည်ရွယ်ထားတယ် ။ တစ်ကယ်ဆို လူ့အလို နတ်မလိုက်နိုင်တာမှန်ပေမဲ့… သူဘာလို့ လိုအပ်ချက်မှန်သမျှ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လဲဆိုတာ …. etone လိုချင်ခဲ့တာ သစ္စာစောင့်သိမှူ ၊ ရိုးသားပွင့်လင်းမှူ ၊ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှူနဲ့ ချစ်ခင်ကြည်နာမှူတွေပဲမို့လို့ပါ ။ တခြား ဒြပ်ဝတ္တု ပစ္စည်းတွေက အခုလက်ရှိအနေထားမှာတင် လူတန်းစေ့ နေနိုင်နေတဲ့ အတွက် ရောင့်ရဲတင်းတိမ် တတ်ရင်ပဲ အားလုံး အဆင်ပြေပါပြီ ။
ကူးသွားပါတရ် … ဖတ်ခိုင်းဖို. … ဟာဟ
လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အကြားမှာ “နားလည်ပေးမှု၊ စာနာပေးမှု“ ဆိုတဲ့ အလင်းအား ရှိတဲ့ ဖယောင်းတိုင်လေးသာ ရှိနေသေးရင် “အချစ်“ဆိုတာ ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ “သံယောဇဉ်“ ဆိုတာ ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ “မေတ္တာတရား၊ ကရုဏာတရား“တွေ ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ “နားလည်ပေးမှု၊ စာနာပေးမှု“ ဆိုတဲ့ ဖယောင်းတိုင်လေးသာ မီးငြိမ်းသွားခဲ့ရင်… အခန်းကြီး မှောင်မည်းသွားသလို အချစ်တွေ၊ မေတ္တာတရားတွေ၊ သံယောဇဉ်တွေ၊ ကရုဏာတရားတွေ ပြန်ဖြစ်ဖို့ မလွယ်တော့ပါဘူး။ လူ့ဘဝရဲ့ အနှစ်သာရလည်း ပျက်စီးသွားတော့မှာပါပဲ။
Forward mail က ရတာလေးကို ပြန်မျှပေးလိုက်တာပါ ….